Sonic Robo Blast 2 Kart: Mario-yakavakirwa mota mutambo neSonic | Linux Vakapindwa muropa
Sonic Robo Blast 2 Kart: Iyo nharaunda inogadzirawo Mario-yakavakirwa mota mutambo naSonic neshamwari dzake semunhu mukuru
Mazuva mashoma akapfuura tataura newe kubva kuSonic Robo Blast 2. Iri izita rakagadzirwa nevateveri vanosanganisa mamwe mepu uye zvinhu zveDoom Legacy neSEGA's mascot, Sonic the hedgehog. Nhasi tiri kuzotaura nezve imwe «Robo Blast», kunyanya a Sonic Robo Blast 2 Kart iyo mune ino kesi yatora Nintendo yaMario Kart sereferenzi, asi zvakare inoratidza Sonic neshamwari dzake.
Dhawunorodha zvinongedzo zveWindows uye macOS zviri pano, asi vashandisi veLinux havazokwanise kuitora kubva pane iyi link iripamusoro. Kana isu tichida kunakidzwa nayo paPC edu, isu tichafanirwa kuitora kubva kuFlathub, zvinoreva kuti kugoverwa kwedu kweLinux kunofanirwa kuve neFlatpak rutsigiro inogoneswa. Kana isu tiinayo, kuiisa iri nyore sekudzvanya Iyi link uye enda kumberi mune yedu software centre.
Sonic Robo Blast 2 Kart inogadziridza ye v2.1
Sonic Robo Blast 2 Kart inogadziridza ye v2.1 iyo isina kugashira chero nhau kana kugadzirisa kwenguva yakareba. Iye zvino tiri kutarisana nemutambo yakafanana chaizvo neanozivikanwa Mario Kart: isu tine macircuit akawanda ekusarudza kubva, tinogona kutyaira chero hunhu, kutsauka uye kunyange kushandisa zvinhu, zvakanyanya kukosha kana tichida kuenda nekukurumidza kana kudzora vavengi. Isu tinodzora mutyairi wedu nemakiyi emakorokoza (kumusoro, pasi, kuruboshwe uye kurudyi) uye iyo A yekumhanyisa, iyo S yekutsvedza uye iyo D kuti ibhure. Nebhawa nzvimbo tichazoshandisa zvinhu zvatiinazvo.
Kana iwe uri kufunga nezve kutamba iri zita, ini ndinokurudzira zvinhu zviviri: yekutanga kuenda mukugadzirisa kwayo uye kugadzirisa iwo marongero kune aya atinonzwa kugadzikana nawo. Chinhu chechipiri ndechekuti, pazvinogoneka, ngatitambe neshamwari kana mhuri, sezvo zviri izvo chaizvo izvo izvo Mario Kart uye iyi multiplatform "dombo" rakagadzirirwa. Chero chaunosarudza, icho chinovimbiswa ndechekuti iwe uchavaraidzwa, saka ini ndaizoedza. Muchokwadi, ndiri kuenda kuzoona kana ndichivandudza nguva dzangu (hazvinganetsi zvakanyanya ...) izvozvi zvandakadya. Chisarai!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Sonic Robo Blast 2 Kart: Iyo nharaunda inogadzirawo Mario-yakavakirwa mota mutambo naSonic neshamwari dzake semunhu mukuru
Ndatenda neruzivo. Ini ndaisaziva uyu mutambo.
Linux 5.10: ine rutsigiro rwekutarisa kwekushisa kweiyo AMD Zen 3
Kaspersky anoti Linux inowedzera yakanangidzirwa pakurwiswa